Description:Film Stretch Packaging,Famonosana plastika,Sarimihetsika mihetsika Film
 HomeProductsSarimihetsika mihetsikaFilm mihetsikaFonosana tanana fonosana fonosana horonana horonam-boky
Packaging Stretch Film amin'ny alàlan'ny teknika mialoha mialoha, hampiasa ezaka lehibe sy azo ampiasaina ho an'ny indostrian'ny varotra, ara-barotra, an-trano, fambolena ary fiarovana hafa fonosana ary ny rano, porofon'ny vovoka, porofo hamandoana. Ny lamba vita amin'ny fonosana dia tsy mora ny mifikitra vovoka, fahasalamana madio. Famoronana sarimihetsika Stretch, aorian'ny fampiasana fitaovam-panodinana an'izao tontolo izao dia azo ampiasaina amin'ny zavamaniry famokarana 100%. P mipetaka plastika plastika dia mety hampihena ny fandotoana ny tontolo iainana, fa koa mitahiry ny vidin'ny fonosana fanodinana.
Bundling Stretch Film dia horonan-tsarimihetsika Baby roll Stretch, izay ilay filma mety raha toa ka te-hampidina ny fampiharana ianao na faniriana avo lenta kokoa. Ity horonantsary ity dia hakingan-tsarimihetsika, horonan-tsarimihetsika miaraka amin'ny haitao avo lenta. Ny endri-javatra fanatsarana sy ny elanelana dia midika fa ny sarimihetsika mini mom dia manome fitaomana indrindra amin'ny vesatra tsy dia mitaky loatra.
Q: Mpanamboatra orinasa na mpivarotra ve ianao?
A: Izahay dia orinasa iray izay ao amin'ny No. 230, West Liuhua Street, Xiakou, DongchengDistrict, Dongguan, Guangdong, Sina ..
Q: Inona no zavatra lehibe ataonao?
A: horonan-tsarimihetsika LLDPE, PP mametaka, horonantsary fanisy.
Q: Ahoana ny fanaraha-maso ny kalitao orinasa?
A: Nametraka rafitra fanaraha-maso hentitra sy feno fanamboarana kalitao izahay, izay manome antoka fa mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa ny vokatra tsirairay
A: Eny, afaka manome ohatra maimaimpoana ho anao izahay.
Q: Azo atao pirinty amin'ny fonosana ve ny volavolan-tenantsika manokana / label?
A: Eny, ny takelaka / marika manokana anao dia azo atao pirinty ao anaty fonosana, amin'ny fanomezan-dàlana ara-dalàna anao, manao serivisy OEM mandritra ny taona maro.
A: Matetika izahay dia afaka manonona ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fametrahanao ny fanontanianao raha maika ianao vao mahazo ny vidiny. Azafady mba antsoy izahay na ambarao anay amin'ny alàlan'ny mailaka mba ho laharam-pahamehana.
Product Categories : Sarimihetsika mihetsika > Film mihetsika
trano mora ampiasaina depot pe stretch wrap film Contact Now
Bustling plastika mihetsika fonosana boribory mihetsika Contact Now
Hamafa ny sarimihetsika fonosana vita amin'ny plastika mba hivezivezy Contact Now
Fametahana plastika mitehika be dia be hifindra Contact Now
Sarimihetsika fonosana vita amin'ny plastika LLDPE Contact Now
plastika mihetsika fonosana fonosana tanana Contact Now
ny fonosana fonosana mifindra Contact Now
fonosana tanana amboarin'ny tanana amin'ny tànana Contact Now
Film Stretch Packaging Famonosana plastika Sarimihetsika mihetsika Film Film Stretch manga Film for Pallet Packaging Film Stretch malefaka Film Film Packaging Stretch Film Packing